ဧရာဝတီ - ရုပ်/သံ: Face to Face (Irrawaddy)
Face to Face (Irrawaddy)
U zaw oo is the wise one...his knowledge is precious... you needs to ask him for the future and economic of the Nation ..but you are not. ..i found that you are trying to set up what you wanted... How's Shame you are...
This is very good.All person should do any ways to develop Myanmar country.
Aung Tun said...
U Zaw Oo, what are you talking about? how can we believe 'change' in Nay Pyi Taw?
မေးတဲ့ကောင်က ဘာကောင်လဲ.. ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ဟ.. သူတောင်းစား..
zaw oo, we know who you are.. people should know who you are. and they will know soon
ပထမ ဦးဆုံး ကိုကျော်စွာမိုးကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေ။ ထိရောက်တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အတူ၊ ဒေါက်တာဇော်ဦးကို အင်တာဗျူးခဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဒေါက်တာဇော်ဦးကို လည်း ကိုယ့်လူမျိုး၊ နိုင်ငံ အတွက် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာတစ်ခုနဲ့ ကူညီနိုင်တဲ့ အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးမြင့် ကိုလည်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ဒီလို ပြောလို့ အစိုးရဘက်က လူလို့ မထင်လိုက်နဲ့ ၊ ဘယ်သူ့ ဘက်ကမှ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး အားနည်းချက်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာတွေကို ပဲ ဟိုပြော၊ ဒီပြော၊ ဝေဖန်နေတဲ့ (ခပ်တုံးတုံး) လူစားမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ချစ်တဲ့ အဝေးရောက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်။ ကြုံတုံး ပြောပါရစေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ကို တကယ်မြတ်နိုးရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတွေကို ခဏ မေ့ထားပြီး၊ ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ (ဘာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသလဲ) ဆိုတာ အရင် စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်လူမျိုး အတွက် ဘာမှ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိဘူး ဆိုရင်၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတွေ လုပ်နေတာတွေကို မကောင်းမပြောပါနဲ့ ၊ ဝေဖန်လို့ ရတဲ့ အရည်အချင်းရှိမရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် သုံးသပ်ပါ။ ခက်တာက ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မှာ (အော်) နေတဲ့ လူတွေများပြီး၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေ တော်တော်နည်းနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မတိုးတက်တာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူ နည်းပြီး၊ စကားများတဲ့လူ (အော်) နေတဲ့လူတွေ များနေလို့ ။ Freedom of Voice၊ ဟုတ်ကဲ့ လက်ခံပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိရှိ အော်နေတဲ့ လူမျိုးတွေကို တော့ ၊ တကယ်လေးစားပါတယ်။ ဒီအင်တာ ဗျူး ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ နောက်တစ်ချက် က AEC ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါနေသလဲဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ပဲ။ စီးပွားရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်၊ စီးပွားရေးပညာ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီအင်တာဗျူးကို ကြည့်ဖို့ အကြံပေးမယ်။ သူတို့ ကိုယ့်လူမျိုး အတွက် တစ်ခုခု ကူညီနိုင်တယ်ဆို ရင် ကျေနပ်ပြီ။
ကောင်းသောတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲတခုဖြစ်ပါတယ်၊ သံသယပျောက်၍အမှန်ဘဝရောက်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Pls, learn how to ask. You cannot ask professionally. Learn for it.
More diverse and interesting comments in their blog: http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4749642226130897912&postID=6945929205538524696
မေးခွန်းမေးတဲ့ကောင်ညံ့လိုက်တာကွာ။ ဒီကောင်အသံကောင်းဟစ်ပီ ဒေါ်လာ စားနေတဲ့ကောင်တွေ မြန်မာပြည်မှာကျတော့ ဘာတစ်ခုမှကျေးဇူးပြုဖူးတဲ့ကောင်းတွေမဟုတ်ဘူး
interviewer should not interrupt.
စောက်ရူး တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဆိုပြီး ဆရာကြီးစတိုင်လ်နဲ့ ...
You should try to think how to benefit Myanmar and its people instead of doing meaningless discussions.
thank you for your positive way,U Zaw Oo.
i am really happy hear to that.Everybody need to involve to get more and more development myanmar country, anyway.i really hope that all of your gentlemen are really love our country.pls keep it up.
what do you want to talk about Mr. Interviewer? Probably, you just want hear about the past crimes.I think, firstly, you need to change yourself to realize the current situation. I like Mr. Zaw Oo's discussion. Thz Mr. Zaw Oo.
Don't say like that... U Zaw Oo isawise and educated man... The main reason for politics is to develop the country in all aspects ... If economic change , politic and other sector will change sooner or later...
The interviewer is so stupid and dun have brain... He trys to frame U Zaw Oo to get the answers what he wants. He isabad interview bcoz he never listens and waits what interviewee answered...If he dun like U zaw oo's answer, he just interrupted and tried to change the subject...At least he should have respect to interviewee(U Zaw Oo) and shoot another questions when U Zaw Oo 's answer is finished....
Zaw Oo you are doctor turn politicion.Are you no more intrested in the health of Burmese people.I think it is more important to concentrate on health than polictics.